Nasongadina Indray Ny Olana Ara-Tontolo Iainana Maro Ao Libanona Amin’ny Fitsidihan’ny Greenpeace · Global Voices teny Malagasy
Nasongadina Indray Ny Olana Ara-Tontolo Iainana Maro Ao Libanona Amin'ny Fitsidihan'ny Greenpeace
Voadika ny 05 Septambra 2016 7:35 GMT
Ny ‘Rainbow Warrior III’ ao Beirota, Libanona. 27 Aogositra 2016. Sary: Christophe Maroun.
Niantsona tao amin'ny Seranan-tsambon'i Beirota tamin'ny 26 Aogositra 2016 i ‘Rainbow Warrior III’ izay an'ny fikambanana iraisampirenena tsy miankina miaro ny tontolo iainana Greenpeace, fiatoana voalohany amin'ny fitetezam-paritra izay ataony amin'ny fanentanana ny fampiasana ny angovon'ny masoandro any amin'ny firenena Mediteraneana.
Manohana ny fanentanana ataon'ny Greenpeace amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ilay sambo, anisan'izany ny lahasa fijerena fanjonoana tsy ara-dalàna, ary manan-danja indrindra any Libanona ny iraka atao amin'ny angovon'ny masoandro, firenena iray izay nifanehitra tamin'ny loza ara-tontolo iainana teo taloha.
Niatrika krizin'angovo nanomboka tamin'ny faran'ny ady an-trano tamin'ny 1990 i Libanona. Hatramin'izao, mbola mianjady amin'i Libanona ny fahatapahan-jiro isan'andro izay maharitra hatramin'ny 18 ora arakaraky ny faritra ary manery ny ankamaroan'ny Libaney hampiasa gropy mandeha amin'ny solika. Hatreto tsy afaka nanentsina ny elanelana misy eo amin'ny famokarana 1800 MW sy ny fandaniana 3000 MW amin'ny fotoana mahabe mpampiasa herinaratra ny fitondram-panjakana nifandimby, amin'ny milina famokarana angovo efa lany andro, mandoto ny rivotra iainana ary mila fikojakojana. ” Naorina tamin'ny 1996 ny milina famokarana herinaratra farany indrindra tao Libanona any Deir Ammar sy Zahrani, izay samy mamokatra herinaratra 450 MW “, izay ambany lavitra amin'ny angovo takiana , araka ny tatitry ny gazety Libaney The Daily Star .
Araka ny filazan'ny mpiasam-panjakana ambony, niasa tao amin'ny orinasam-panjakana Electricite du Liban, teo aloha tao amin'ny The Daily Star:
Raha tsy manangana milina famokarana herinaratra matanjaka kokoa isika dia mbola hiaina hatrany amin'ny fahatapahan-jiro henjana isan'andro. Tsy eto am-pelatananay ny vahaolana, fa eo am-pelatanan'ny governemanta.
Ankoatra izany, manasongadina ny olana hafa koa ny fikarohana solika an-dranomasina sy fitrandrahana etona – izay resahina amin'izao fotoana izao ho mety ho vahaolana amin'ny krizin'ny angovo misy ao amin'ny firenena. Na dia toa mahaliana aza dia tsy afaka hanome vahaolana maharitra amin'ny lafiny rehetra ara-pamaritana ny fitrandrahana solika sy etona. Ary mety ho lasa fijaliana ho an'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana ireo loharanon'angovo noho ny tahan'ny kolikoly efa manana ny lazany ao Libanona.
Hoy ny tenin‘i Peter Willcox, kapitenin'ny Rainbow Warrior III hoe:
Tonga ny fotoana ho an'ny olona eto mba handraisana izay mamirapiratra eny amin'ny lanitra 300 andro isan-taona, fa tsy izay trandrahana avy amin'ny tany. Tsy mikasika ny momba ny fanorenana ny hoavy maharitra ao amin'ny angovo azo havaozina ho an'ny faritra ihany fa mila miala amin'ny angovo avy any anaty tany koa isika hiarovana ny fahasalaman'ny planeta sady manome tanjaka ireo vondrom-piarahamonina ao an-toerana.
Mazava ho azy, tsy afaka ny tsy hampahatsiahy ny firenena amin'ny krizy mitohy amin'ny fitantanana fako niangona nandritra ny taona ny Rainbow Warrior III, izay niteraka indrindra ny hetsika ‘Maimbo ianareo’ tamin'ny fahavaratra 2015, ary nahitana olona an'aliny nanao diabe manohitra ny governemanta. Manavaka ireo fakony ny ekipan'ny sambo ary mametraka ireo fako samihafa rehetra araka ny sokajiny avy ao amin'ny dabam-pako mba hanodinana izany ao amin'ny firenena iandronany.
Nisafidy indrindra ny tsy hanodina ireo fako naterany izay vokariny ny Greenpeace mbola ao Beirota, fa nanapa-kevitra ny hitahiry ny fako tao an-tsambo, ary hanodina izany any Torkia, toerana halehan'ny sambo manaraka. Tsy mbola mahita ny vahaolana maharitra amin'io olana io ihany koa ny governemanta Libaney hatreto, eny fa na dia soso-kevitra mandalo fotsiny aza — miatrika sakana amin'ny fametrahana izany avy amin'ny mponina ao an-toerana ny toerana fitobiam-pako any amin'ny faritra Bourj Hammoud sy Costa Brava, raha nosakanana sy nahilika ny tolo-kevitry ny fiarahamonim-pirenena hampiditra drafitra fitantanana fako.
Amin'ny fiverenan'ny fako indray eny an-dalambe tao anatin'ny andro vitsivitsy sy ny sakana ara-politika amin'izao fotoana izao dia hita toa lavitra ny vahaolana hamahana ny krizy i Libanona .
Manohana ihany koa ny “kaoperativa famokarana sy fanodinana ara-pambolena” tantanan'ny vehivavy any amin'ny faritra atsimon'i Libanona ny Greenpeace. Mampiofana tovolahy Libaney, Syriana ary Palestiniana miisa 12 ny fikambanana hanangana takela-masoandro hamaliana ny tinady ara-kerinaratra izay indraindray mety mahatratra hatramin'ny 22 ora ny fahatapahan'ny herinaratra .
Nanazava ny maha zava-dehibe ny takela-masoandro ho an'ny faritra i Daad, mpikambana iray ao amin'ny kaoperativa:
Voatery miasa tanana izahay rehefa tsy ampiasaina ny milina mandeha herinaratra . Ho betsaka kokoa ny vokatra raha mandeha hatrany ny herinaratra. Handray soa indrindra avy amin'ny asanay ny vehivavy miasa eto ary koa hiroborobo ny kaoperativa.
Nandefa fanentanana fanohanana ara-bola an-tserasera ny kaoperativa miaraka amin'ny fanantenana ny hahazo 8.000 $ ato anatin'ny roa volana. Nanazava ao amin'ny habaka ny fomba ampiasaina ny vola izy ireo:
Hanomboka miaraka amin'ny fanamarinana ara-angovo hamantarana ny angovo lany ny famadihana ho amin'ny herin'ny masoandro ny angovo miasa ao amin'ny foiben'ny kaoperativan'ny vehivavy. Avy eo, hapetraka ny fepetra hampihenana ny fandaniana angovo amin'ny fanatsarana ny fanazavana sy ny fiarovana ny fantsona. Farany, hapetraka ao an-tafontranon ‘ny Kaoperativa ny rafitra ho an'ny angovon'ny masoandro.
Ny Rainbow Warrior III no sambo voalohany an'ny Greenpeace naorina manokana ho an'ny fikambanana. Nanomboka niasa izy io tamin'ny Oktobra 2011 taorian'ny nijanonan'ny Rainbow Warrior faharoa. Ity farany kosa no nisolo ny Rainbow Warrior voalohany indrindra rehefa nodarofan'ny mpitsikilo frantsay tany amin'ny morontsirak'i Nouvelle-Zélande baomba izany tamin'ny 1985.
Efa nokendrena hifarana ao Maraoka mandritra ny fotoam-pivorian'ny COP 22 sahanin'ny Firenena Mikambana amin'ny 14 sy 15 Novambra 2016 ho avy izao ny dian'ny sambo. Tsy toy ny Fihaonamben'ny Mpikambana ao amin'ny Firenena Mikambana teo aloha fa ny COP 22 kosa no ho COP voalohany taorian'ny “naneken'ny mpikambana rehetra miisa 196 tao [ amin'ny COP 21] ny tanjona fampihenana ny fiakaran'ny maripana ho eo ambanin'ny roa degre izay tanjona tsy maintsy atao noho ny fikorontanan'ny toetr'andro eran-tany “.